I-qui ye-Koi ye-quartz - i-Red kunye ne-orange hematite inclusions - ividiyo
Thenga i-quartz yendalo yeKoi yendalo kwivenkile yethu
I-quartz yentlanzi ye-Koi lilitye elinqabileyo. Olubomvu kunye neorenji zizinto ezibandakanyiweyo zehematite. Umbala womxholo wentsimbi oye wahlanganiswa. I-Hematite kunye ne-quartz zihlala zifunyenwe ngokwahlukeneyo, kodwa kunqabile ukuba kunye.
IHematite, ekwabizwa ngokuba yi-haematite, yindawo eqhelekileyo yentsimbi enefomula ye-Fe2O3 kwaye ibanzi ematyeni nasemhlabeni. Iifom zeHematite ekwimo yeekristali ngenkqubo ye-latrice ye-Rhombo, kwaye inesakhiwo sekristali efanayo ne-ilmenite kunye ne-corundum. IHematite kunye ne-ilmenite zenza isicombululo esizinzileyo kumaqondo obushushu angaphezulu kwe-950 ° C.
IHematite inombala omnyama ngentsimbi okanye isilivere-ngwevu, nsundu ukuya kobomvu-mdaka, okanye bomvu. Inombiwa njengeyona ndawo iphambili yentsimbi. Iintlobo ezahlukeneyo zibandakanya i-ore yezintso, i-martite, i-iron iron kunye ne-specularite. Ngelixa ezi fomu zinokwahluka, zonke zinerenbomvu ebomvu. IHematite inzima kunesinyithi esicocekileyo, kodwa iba brittle ngakumbi. I-Maghemite yiminerali ene-hematite- kunye ne-oxite enxulumene ne-oxide.
I-Clay sayizi hematite amakristali anakho ukwenzeka njengesimbiwa esisekondari esenziwe ziimozulu zemozulu emhlabeni, kwaye kunye nezinye i-iron oxide okanye i-oxyhydroxides efana neethethite, inoxanduva lokufaka umbala obomvu kwiindawo ezininzi ezishushu, zakudala, okanye ngenye indlela.
I-quartz yentlanzi ye-Koi yinto enzima, e-crystalline yamaminerali eyenziwe nge-silicon kunye nee-athomu zeoksijini. Iiathom zidityaniswe kwisakhelo esiqhubekayo seSiO4 i-silicon oksijini tetrahedra, kunye neoksijini nganye ekwabelwana ngayo phakathi kweetrahedra ezimbini, inika ifomula ye-SiO2. I-Quartz yeyona minerali yesibini ngobuninzi kwilizwekazi lase-Continental, ngasemva kwe-feldspar.
Zininzi iindidi ezahlukeneyo zeclartz, ezininzi zazo zixabile zixabana ngamatye anqabileyo. Ukusukela mandulo, iintlobo zeekota ziyinto yezona zinto zisetyenziswayo xa kusenziwa ubucwebe kunye nemifanekiso eqingqiweyo enzima, ingakumbi e-Eurasia.
I-Koi fish quartz intsingiselo
I-Quartz yaziwa ngokuba ngumphilisi oyintloko kwaye iya kukhulisa amandla kunye nokucinga, kunye nefuthe lezinye iikristali. Iyamkela, igcina, ikhuphe kwaye ilawule amandla. Cacisa iQuartz Ukutsala amandla amabi azo zonke iintlobo, ukuguqula imitha ngemitha, kubandakanya electromagnetic smog okanye i-petrochemical emanations. Iyalinganisa kwaye iphinde ihlaziye uhambo lomzimba, lwengqondo, lweemvakalelo kunye nolokomoya. Icoca kwaye iphucule amalungu kunye nemizimba ecashile kwaye isebenza njengomcoci onzulu womphefumlo, ukudibanisa ubukhulu bomzimba nengqondo. Iphucula ubuchule bengqondo. Inceda uxinzelelo kwaye ivule inkumbulo. Kukhuthaza amajoni omzimba kwaye kuzisa umzimba ukulingana.